Qofka iibiya farsamada (waxbarashada waqti dhiman) - GO! SPECTRUM SCHOOL
Dukaamada & Iibsiga
Kama iibinayno hawada
Dukaameysiga & Iibiyaha
Waxaad baran tababarka sale qabashada macaamiisha. Waxaad tababar si fiican hadalka (afka iyo odhaah); waa in ka mid ah oo ku baaqay in iibka (AVRUVOCO), farsamooyinka isku dhac maaraynta, farsamooyinka xalinta dhibaatada, wada shaqayn, wada xaajood iyo dhaadhiciyo.
Waxaad baran xirfadaha iyo farsamooyinka iibka. Waxaad baran inaad samaysaan diiwaanka lacagta caddaanka ah oo ay hayaan dukaanka. Hel fikrad ganacsi iyo aqoonta wax soo saarka.
Waxaad tahay set ganacsi
tababarka sale (POS Tafaariiqda) qaadataa laba ilaa saddex sano. Waxaad heli kartaa kala duwan shahaadooyinka replenisher helo, shaqaalaha magalka in iibiyaha.
Ogaanshaha aqoonta looma baahna. Waxaa muhiim ah, si kastaba ha ahaatee, in aad ku hadli kartid Dutch ku filan iibka maaddaama aad si joogto ah ula xiriirto macaamiisha.
ALS karaaniga aad la gayn karo goobaha kala duwan ee gudahood waaxda iibka; Tusaale ahaan, sida wakiil, iibiye farsamo ama shaqaalaha xafiiska. Waxaad ka shaqayn kartaa dukaanka raashinka ah, dukaan dharka a ...
Iyada oo go'an, dhiirogelin iyo ganacsiga toosiyaan midig waxaa weli jira fursado koritaanka shaqo gudahood.
Ka dib tababar iibka karaanigaxataa Waxaad bilaabi kartaa college ee xarunta kale (tusaale HBO5), ganacsiga caalamiga ah, marketing ...